टर्कीको आक्रामक सिरिया युरोपको लागि बन्दरगाह: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	10 अक्टोबर 2019 मा	•6टिप्पणिहरु
यो थोरै हास्यास्पद थियो कि उत्तर सिरियामा टर्कीको आक्रमणप्रति डच राजनीतिज्ञहरूले हिजो कसरी प्रतिक्रिया देखाए। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसमा धेरै दिन भइसकेको थियो जब टर्कीले अमेरिकासँग सम्झौता गरेको थियो र टर्कीले आक्रमण गर्न बाटो दिन ट्रम्पले आफ्नो सेना फिर्ता लिएको थियो। हामी त्यसलाई 'खाना पछि रायोको' भन्ने गर्दछौं। त्यसोभए तपाईले यस्तो देशलाई चिच्याउनु भन्दा अघि नै टिक गर्नुहुन्छ जब ढिलो हुन्छ। अब यो स्पष्ट हुन सक्छ कि राजनीतिज्ञहरु माथि उल्लिखित मास्टर स्क्रिप्टको बारे मा सचेत छन् र अधिकमा "स्टेजको लागि" को अभिनय।ओह, हामी कति रिसाउँछौंखेल्नुहोस्। अमेरिकाले कुर्दिश वाईपीजी लडाकूहरूबाट फिर्ता लिए जो पहिले स्व-निर्मित आईएस (पहिले आईएसआईएस) सँग लड्न प्रयोग गरिएका थिए। के त्यो तपाईंलाई अनौंठो लाग्छ, कि म भन्छु IS सिर्जना गरिएको थियो? त्यसो भए तपाईले पहिले मास्टर स्क्रिप्टको माध्यमबाट हेर्नु पर्छ।
मास्टर लिपि यो छ कि टर्की शक्तिमा बढ्नु थियो। टर्कीलाई त्यसका लागि शक्तिको साधन चाहिएको थियो र यसको अर्थ शरणार्थीहरूको युरोपमा प्रवाह हो। सिरियामा स्व-निर्मित प्रोक्सी सेनाहरू मार्फत युद्ध सुरु गरेर तपाईंले हतियार उद्योगलाई मात्र सहयोग गर्नुभएन, तर टर्कीले सुनको नल समात्यो। यदि टर्कीले शरणार्थीहरूको युरोपमा ढोका खोल्न दियो भने त्यसले युरोपमा अराजकता निम्त्याउने छ। त्यसका लागि त्यहाँ ट्यापमा अलि बढी दबाब हुनै पर्छ, जस्तै पानीको टावरले पाइपहरूमा दबाब दिन्छ। सिरियामा युद्ध सुरु भयो। एक युद्ध धेरै धेरै शरणार्थीहरु को माध्यम मा नेतृत्व मा दबाव। त्यतिन्जेल नेदरल्याण्ड र अन्य देशहरूबाट आएका अन्तर्राष्ट्रिय गोप्य सेवाहरूले सिरियाको भ्रमण गर्न उत्सुक भएका सबै जिहादीहरूको बिरूद्ध “केही पनि गर्न नसक्ने” गरेर राम्रो सहयोग गरिरहेका थिए। यसरी तपाईं प्रोक्सी सेनाहरू बनाउनुहुन्छ र क्रोधित राजनीतिज्ञहरू र जेरोएन्टजेस पौउ र म्याथिज भ्यान निउवेकर्कजेससँग कुराकानी कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति कायम राख्नुहुन्छ जसले जनताको आँखालाई बिरोधमा बन्द गर्न सक्दछ (निश्चित रूपमा ठूलो तलबको बिरूद्ध)।
यसै बीच टर्कीले एकेपी र एर्दोगन युग अन्तर्गत एक सुदृढ सैन्य उद्योगको निर्माण गर्‍यो, जसमा कुनै मिडियाले पनि ध्यान दिएन। यो अब ठूलो समुद्री फ्रिगेटहरू आफै उत्पादन गर्न सक्षम छ, ट्याks्की, ड्रोन, अपाचे भन्दा लडाई हेलिकप्टर राम्रो उत्पादन गर्दछ र सूची पूरा गर्न सकिन्छ। देशसँग एक सेना पनि छ जुन तपाईं बिरूद्ध बताउनुहुन्छ र यदि यसले केही फरक पार्छ भने केहि दिन भित्र यूरोप भर रोल। टर्कीले गत शताब्दीको 30 मा जर्मनीले गरेको काम गर्यो, जब कसैले ध्यान गरिरहेको थिएन। यो नाटो गठबन्धन भित्र दोस्रो ठूलो सेना छ (अमेरिका पछि); त्यो गठबन्धन जुन वास्तवमा अब अवस्थित छैन, किनकि इयु टर्कीसँग रिसाएको छ र मन्त्री स्टेफजे बल्कले टर्की चाहन्छ मतदान सही नाटो र अमेरिका भित्र टर्कीको साथ बहस भइरहेको थियो र प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यी प्रतिबन्धले तुर्की लीरामा ठूलो गिरावट आएको छ, तर हामी यसको विचारमा यसको विपरीत हो, यो गोप्य रूपमा टर्की अर्थतन्त्रका लागि धेरै फाइदाजनक छ। न केवल यसले धेरै पर्यटक उत्पादन गर्दछ (किनकि सस्तो छुट्टिहरू), तर यो विशेष गरी निर्यातको लागि राम्रो हो। हुनसक्छ टर्कीले तपाईले थाहा पाउनु भन्दा बढी हतियार उत्पादन गर्दछ, यो सैन्य उद्योगको लागि धेरै राम्रो छ, ताकि तपाईले एक देशको रूपमा यसमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ।
टर्कीले यसैले प्रायः सबै आफैं उत्पादन गर्न सक्दछ र साथै 5e जेनेर फाइटर जेट पनि विकास अन्तर्गत छ। टर्की युरोपको ब्लिट्ज क्रेगको माध्यमबाट लामो योजनाको लागि तयार छ। त्यसका लागि यो उपयोगी छ यदि त्यहाँ युरोपमा पहिले नै अराजकता रहेको छ र ब्रेक्सिट यसको लागि प्रयोग गरिएको थियो, तर यसले सहयोग पनि गर्दछ कि बाँया र दायाँ बीचको ध्रुवीकरण ठूलो उचाइमा बढाइएको छ (सेवाहरू आफैंले बनाएको आतंकवाद)। बत्तीलाई मात्र ईयुको सिमाना भित्रको पाउडर क्यागमा फालिनु पर्छ। दृश्य सेट आक्रमण संग केहि अधिक मिडिया hoaxes; त्यो चमत्कार हुनेछ। यदि टर्कीले उत्तरी सिरियामा आपत्तिजनक कुरा मिल्छ भने युरोप तिर शरणार्थी ट्याप खोल्दा (किनभने इयु स्वागतको लागि प्रतिज्ञा गरिएको6अरब समर्थनको साथ सबै मार्गमा जान चाहँदैन; किनभने ईयूले टर्कीले ईयुमा प्रवेश गरेको वर्षौंसम्म सताएको छ र ईयू उत्तरी सिरियामा शरणार्थीहरू पाउने सुरक्षित क्षेत्रलाई समर्थन गर्न चाहँदैन।), त्यसपछि आवश्यक पूर्व-IS लडाकूहरू युरोपमा प्रवाह गर्छन् र त्यसपछि तपाईं प्रोक्सी युद्धलाई यूरोपियन क्षेत्रमा सार्न सक्नुहुन्छ र तपाईंलाई समस्या छ, जसको लागि टर्कीले त्यसपछि मुक्तिदाताको रूपमा कार्य गर्न सक्छ।
त्यो ट्रम्पले अब कुर्दिश वाईपीजी लडाकुहरूलाई ईंटा झार्दै छ, यदि (यदि तपाइँ मास्टर स्क्रिप्ट हेर्नुहुन्छ भने) धेरै बुझ्न सकिने छ। इयु शायद सम्भवतः ट्रम्पलाई फेरि दोष दिन सक्छ, तर हामी बिस्तारै त्यो राजनीतिक झगडाको बारे सचेत हुँदैछौं।
हामी ओटोम्यान साम्राज्यको पुनरुत्थानको पूर्व संध्यामा छौं र टर्कीसँग सबै सम्पत्ति छ। त्यो सबै मास्टर स्क्रिप्टको अनुसार छ, तर म त्यसलाई मेरो नयाँ पुस्तकमा फेरि व्याख्या गर्नेछु। मैले यस साइटमा बारम्बार वर्णन गरिसकें, तर कहिलेकाहीँ यो पैसा लाग्न केही समय लाग्छ। टर्की नयाँ विश्व शक्ति हो र अमेरिका यसको ल्याटिनको अन्तमा पश्चिम रोमन साम्राज्य हो। ध्यानपूर्वक निर्माण गरिएको ब्रान्ड 'सही' (कठपुतली ट्रम्प मार्फत आलोचनात्मक सोचको साथ) अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा उडाएर फुलाइनेछ। यसले ट्रम्पसँग काम गर्ने छ र पुरानो राजनीतिक व्यवस्था फेरि उठाइनेछ। उहि समयमा, विश्वव्यापीकरण विरोधी मनोवृत्ति र जलवायु एजेन्डाको आलोचनाको सामना गरिएको छ; किनभने त्यो सबै 'सही' ब्रान्डमा जोडिएको छ। विश्व सरकारको लागि रोड नक्शा पूर्ण रूपले तैनाती गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, ब्रान्डलाई 'अधिकार' दिँदै यसलाई आर्थिक विपत्ति र अराजकताका लागि दोष दिन शक्ति दिईन्छ। उत्तर अमेरिका र युरोपको पर्खाइमा के छ। र त्यसपछि पुरानो रोमन स्टार जेल प्रभावमा आउँदछ: "Ordo ab Chao"। तपाईंले पहिले अराजकता सिर्जना गर्नुभयो र त्यसपछि तपाईं अर्डर बहाल गर्नुहोस्। त्यो नयाँ अर्डर युरोपको एर्दोगनबाट आउनेछ, जुन मेरो वर्षौंको भविष्यवाणी भएको छ। टर्की पाठ लिनुहोस्।
पहेंलो आतंकवादीहरूले पहेंलो भित्तामा पारेको विरोधमा फ्रान्स उर्दूले बताए
सीरिया र इराकमा भू-भाग खतरा छ युरोपमा बढी आतंकको लागि पूर्वनिर्धारित हो?
ट्याग: आक्रमण, EU, विशेष, कोरिएको, शिविरहरू, caged, कुरदीश, नाटो, नोर्ड, आक्रामक, सीरिया, फिर्ता, टर्की, VS, YPG
10 अक्टोबर 2019 मा 09: 17
16 अक्टोबर 2019 मा 18: 43
16 अक्टोबर 2019 मा 18: 44
Führer को योजनाहरु छन् ...
16 अक्टोबर 2019 मा 19: 21
योजना लामो समयदेखि स्थापित भइसकेको छ र (केहि समय अगाडि रिपोर्ट गरिएको छ) त्यहाँ IncNlic आधारमा 50 सुन्दर केन्द्रहरू छन्। तिनीहरू अमेरिकाका हुन्, तर नाटोका सदस्यका रूपमा एर्दोगानलाई पक्कै पनि त्यस्तै चीजहरू हवाईजहाजमा कसरी झुण्ड्याउन सकिन्छ भनेर थाहा छ र बेस फेंसको साँचो उहाँसँग पनि छ।
टर्की अचानक आणविक शक्ति बन्न गइरहेको छ! युरेका!
17 अक्टोबर 2019 मा 20: 11
पहिलो प्रेरणा लुसिफरियनहरूले दिएका थिए, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि एर्दोगानले नाटोको ट्रोजन हार्सको भूमिका निर्वाह गर्छन्। बहाना गर्नुहोस् कि त्यहाँ आन्तरिक द्वंद्व छ र एकै समयमा विरोधाभासी रिपोर्टहरूको साथ आँखामा बालुवाको थुप्रो बिखार्नुहोस् (ब्रेक्सिट पनि हेर्नुहोस्)। हामी हेर्ने छौं कि कसरी डोमिनोजहरू झर्दै छन् ..
धेरै वर्षदेखि मैले सिरियाको बिषयमा पर्याप्त मात्रामा विश्लेषणमा ध्यान केन्द्रित गरेको छु र यस किसिमको भूमिको राजनैतिक विस्फोटकको रूपमा विश्व सम्भ्रान्तहरूमा रहेको देशको महत्त्वमा जोड दिएको छु। डोमिनोज़को श्रृंखलामा पहिलो डोमिनो जसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग सम्बन्धित युद्ध लड्न सक्छ। मलाई लाग्छ कि यो युद्ध धेरै मोर्चामा विकसित हुनेछ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक मोर्चामा, तर यसले धेरै कलाकारहरूलाई समावेश गरेको शूटिंग युद्धमा परिवर्तन गर्न सक्दछ।
मैले अघिल्ला लेखहरूमा भनेझैं भू-राजनीतिक घटनाहरू वैश्विक स्थापनावादीले शोषणको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् जसले उनीहरूको अर्थव्यवस्था ध्वस्त पार्ने कार्यलाई व्याकुल बनाएको छ। उनीहरूलाई एभेरि B बबलको प्रस्फोटनको लागि बोकरीहरू चाहिन्छ, एक एक्सपोलिसन उनीहरूले एक्सएनयूएमएक्समा तरलता कडाई गर्ने नीतिहरूको साथ शुरू गरे जुन अब पूर्ण विकसित आर्थिक संकटमा गति आएको छ। सिरियामा टर्की आक्रमण शिखर विकर्षण घटना हुन सक्छ।
अमेरिकी "फिर्ता" एक वापसी होइन, यो एक ठूलो द्वन्द्वको प्रस्तावना हो जसले विश्वव्यापी क्याबललाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
17 अक्टोबर 2019 मा 22: 01
राइफियन, सबै राम्रा र राम्रा तर यदि सामान्य संदिग्ध व्यक्तिलाई पाईकको कभबल स्क्रिप्टमा आफ्नो भूमिका खेल्न भनियो भने त्यहाँ प्रतिरोध हुँदैन। बेफेल इमर इइन बेफेल हो ...
« विलुप्त विद्रोह सशुल्क कार्यकर्ताहरूको एक समूह
विलुप्त हुने विद्रोह निर्देशक मार्गरेट क्लेन सलामन: "अर्को चरण भनेको सत्य वास्तविक छ भनेर बहाना गर्नु हो" »
कुल भ्रमण: 13.135.038